गोपनियता सम्बन्धि नीति - परिकल्पना - PARIKALPANAA
तपाईंले परिकल्पना वेबसाईटका सेवाहरूको प्रयोग गर्नुहुंदा तपाईं र तपाईंको परिवारको नीजि जानकारीहरूको सुरक्षा गर्न हाम्रो प्रणाली प्रतिबद्ध छ।
तपाईंलाई परिकल्पना वेबसाईटको पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कहिलेकाहीं हामीलाई तपाईंको बारे जानकारीहरू जुटाउन आवश्यक हुन्छ।
यी वेबसाइटहरूमा तेस्रोपक्षको स्वामित्व रहेको र तीद्वारा संचालित वेबसाइटहरूको हाइपर लिंकहरु पनि छन्। बाहिरी वेबसाइटहरूको सामग्रीका लागि परिकल्पना जीम्मेवार छैन। ती वेबसाइटहरूको प्रयोग तपाईंले आफ्नै जीम्मेवारीमा गर्नुपर्छ।
मेरो बारे परिकल्पनाले के कस्तो जानकारी संकलन गर्छ?
जब तपाईं परिकल्पना वेबसाईटको कुनै कार्यक्रम सहभागी हुन वा न्यूजलेटर, प्रतियोगीता, लाइभ च्याट र मेसेज बोर्ड जस्ता परिकल्पना वेबसाइटमा उपलब्ध सेवा लिन चाहनुहुन्छ त्यतिबेला हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीहरू माग्न सक्छौं। त्यस्ता जानकारीमा तपाईंको नाम, इमेल ठेगाना, हुलाकी ठेगाना, टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर र जन्म मिति इत्यादी पर्दछन्।
भनिएको स्थानमा आफ्नो बारेमा जानकारी भरेर तपाईंले परिकल्पना र यसका सेवा प्रदायकहरूलाई आफूलाई चाहिए अनुसारको सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ।
परिकल्पनाले कुकीहरू पनि प्रयोग गर्छ। कुकी भनेको डेटाको सानो मात्रा हो जस्मा तपाईंको अनलाईन चयनका बारे जानकारी रेकर्ड भएको हुन्छ र त्यसबाट हामीलाई हाम्रो वेबसाइट तपाईंको चाहना अनुसार बनाउन सहयोग पुग्दछ।
हामी तपाईंको IP Address को प्रयोग तपाईंले नेपालभित्र वा बाहिर कहाँबाट हाम्रो सेवा लिइरहनु भएको छ भन्ने यकिन गर्न पनि गर्छौं।
यदि तपाईं १६ बर्ष वा त्यो भन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने परिकल्पनाका वेबसाइटहरूमा आफ्नो नीजि जानकारीहरु दिंदा आफ्नो अभिभावक अनुमति पहिले लिनुहोला। त्यस्तो स्वीकृति नलिएका प्रयोगकर्ताहरूले परिकल्पानालाइ आफ्नो नीजि जानकारीहरू दिन पाउंदैनन्।
परिकल्पनाले मेरो बारेमा संकलन गरेको जानकारीको प्रयोग कसरी गर्छ?
"सेवा प्रशासनिक प्रयोजन" लगायत विभिन्न कारणका लागि मात्र परिकल्पनाले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीहरूको प्रयोग गर्छ। परिकल्पनाले तपाईंले लिन चाहनुभएको सेवाका सम्बन्धमा तपाईंलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्छ।
यदि तपाईंले गाली गलौज, अनुपयुक्त वा निषेध गर्नुपर्ने सामग्रीहरू parikalpanaa.com मा वा अन्यत्र पठाउनुभयो भने अथवा parikalpanaa.com मा कुनै पनि ध्वंशात्मक कार्य गर्नुभयो भने, परिकल्पनाले तपाईंको नीजि जानकारीहरूको प्रयोग त्यस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि गर्न सक्नेछ।
परिकल्पनाले मेरो जानकारी कति समयसम्म राख्नेछ?
हामि सम्बन्धित सेवाका लागि आवश्यक परेको समयसम्म तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीहरू राख्‍नेछौं। परिकल्पनाका वेबसाइटमा तपाईंले सामग्रीहरू पठाउनुभएको छ भने त्यस्तो सेवाको उद्देश्यका लागि आवश्यक परेको अवस्थासम्म सामान्यतया त्यसलाई राखिनेछ।